Izigodlo abesifazane. Assumption Sezindela. Tikhvin Monastery
Ezikhathini ezinzima, sihlale baguqukele kuNkulunkulu, umcele akuphe ukukhululwa sisakubona yokutakula, ukuthula kwengqondo. Naphezu noshushiso eziningi zeSonto Lobu-Orthodox, unyaka ngamunye sona wenziwa savuka futhi ukuthembela antante kwezinyawo zakhe. Izixuku zabakhulekeli zithunyelwa ngasemnyango wethempeli ngemaholide omkhulu Orthodox, zama ukubona ukudla nezinye izinsuku ezibalulekile kanye nezinsuku. Ngokuza ethempelini, asigcinanga sithandazele thina, kodwa yathinta nayo yonke labo ngalesi sikhathi kuba khona inkonzo. Izicelo ngabanye zithuthukiswa a-nesibaya eziyikhulu, futhi ngenxa yalokho, imithandazo waqina ngokwengeziwe. Ngo zezindela, bazalwane, imini nobusuku, nisithandazela, ecela uJehova, ngokuba umusa. Namuhla sizoxoxa sezindela ezinye ongcwele, eyaduma hhayi kuphela kulo lonke elaseRussia kodwa futhi emhlabeni.
zezindela Female Russian
Emuva ekhulwini le-11, ngemva nje iRussia bamukela Ukubhapathizwa uJehova futhi waba saint, baqala ukuvela emhlabeni amakhona ukholo nokukhulekela. Izigodlo wayevame ukudlala indima le nqaba, okuyinto wakwazi ukuvikela ukumelana abahlaseli, okwakuyinto ebalulekile ikakhulukazi Ephakathi. Indawo izakhiwo ku nsimu indinganiso: maphakathi ethempelini, azungeze - iseli izindelakazi noma izindela. Kwakukhona zezindela kwabesifazane kanye nabesilisa. On the lokuqala, sikhuluma namuhla.
Ukubukeka kwaso abode ongcwele ukweleta Ioannu Groznomu. Inkosi e 1564 wasala Alexander zokuhlala we uVladimir esifundeni. Kusukela nabasizi bakhe, wamisa ubuzalwane sezindela kanye ukusungulwa ngendlela wezindela ukuphila. Inkosi hhayi kuphela wahlala endaweni, kodwa futhi uyakulahla lizwe eminyakeni 17 ezayo. Wakhuthazelela izindlu eziningi, futhi phakathi nokubusa okukhulu inkosi u-Alexei Mikhailovich, yesigodlo kwaba owesilisa nowesifazane. Kakade ngawo-1727 kwakunabamemezeli nodade abangaba ngu-400. Ngezinye Assumption esigodlweni eziqhutshwa: isikole, indlu pilgrim, esibhedlela, ukuthenga abantu Ukugunda.
Kusukela maphakathi nekhulu le-19, zezindela eziningi abesifazane baqala alulame kancane kancane. Futhi Assumption sezindela savuka: abuyiselwe Cathedral zintathu Ongcwele, umbhoshongo insimbi, ibandla, izindela of bobukhosi egazi kanye nezinye izakhiwo. Ukuziqhenya sezindela - Church of kweNyuka Blessed Virgin Mary, okuyinto kusukela ngekhulu le-16 kuyinto mhlobiso of sezindela.
Izehlo zesifazane abode ongcwele kwakuhambisana nezinga eliphansi isimangaliso. Uma idolobha elincane endaweni ka-Chuvashia yesimanje, Tsivilsk emasontweni ambalwa zibonisa fighters ukuhlasela edume Stenka Razin. zigcine zomuzi mpilo, izakhamuzi baye bayeka ukukholelwa ukuthi kungenzeka ukuvikela izwe lazo lendabuko. Ebusuku, lapho kwanqunywa ukuba ashona, deanery umhlali Iulanii Vasilyeva yabonakala ephusheni UnguNina KaNkulunkulu kanye ukusakaza, ukuthi umuzi ngeke uthole kubaphangi, nezakhamuzi behlonipha lesi senzakalo kufanele kube bebodwa ukwakha nokuphatha izindela. isithombe Engcwele wabikezela ngokunembile indawo lapho kwadingeka okuyibeka. Lesi siprofetho sagcwaliseka, futhi izakhamuzi bajabule futhi ngo-1675 wamisa ibandla yokudumisa Tikhvin Isithonjana UnguNina KaNkulunkulu, futhi kamuva sezindela. Ngo-1870-ke lalenziwa owesifazane, kusukela kuleso sikhathi wathola umoya wesibili.
Kuze kube namuhla,
Ngenxa yemizamo abbesses nodade, zabaningi futhi umane ngabandayo Orthodox sezindela futhi namuhla ophila ukuphila layo eyinqaba. Ngo-2001 yena wavakashelwa Alexy II, ubungcwele baKhe Bishop of All Russia. Ngalesi sikhathi inani elikhulu izakhiwo usubuyiselwe futhi kwaletha ifomu efanele. Russian kwamasiko izibalo, uhulumeni wezwe ka Chuvashia ukugcizelela kakhulu ukubaluleka Tikhvin Monastery, ukuthuthukisa ke. Hhayi omisa ukugeleza pilgrim endaweni engcwele, ngokwengxenye ngenxa lokho kusekelwa ukuphila nezindelakazi.
Zintathu esigodlweni - kungenye indaba. Usuku lokuzalwa luka-abode ezingcwele zabantwana Penza esifundeni, ungacabanga ngokuphepha ukuthi Okthoba 15, 1692. Ngalolusuku lalibe nesiqalo esihle, uMphathi wakhe Yobungcwele aseKhiri Andrian banikeza isibusiso ukuba ukwakhiwa. Umhlabathi ngaphansi abode ezingcwele lokuqoqa "wonke": eyathengwa up iziza eziningana, kamuva elaba indawo ephathelene nokuphatha izindela. Naphezu indawo esingesihle kakhulu futhi budebuduze naleli marshland, sezindela ongcwele eyaduma kulo lonke elaseRussia.
I izikhathi ezinhle nezimbi phakathi Isigodlo ongcwele
Okuningi esigodlweni abanolwazi. Yesithombe ezisekhona kwenzekeni kuye eminyakeni. Lesi simemezelo of uCatherine II Elikhulu sibuyela umhlaba esimweni, futhi imililo eminingi, ngemva kwalokho kwaba nzima ukubuyisela lokhuni sezindela ezakhiwe. Riot Emelyana Pugacheva abathintekayo umlando Isigodlo: ndela, owahlangabeza phangi kamuva elahlekile amasosha omzimba wabo.
Naphezu kwakho konke, imizamo abbess nodade 1780, abode ongcwele kabusha cishe kusuka ekuqaleni, itshe futhi isitini. Umhlahlandlela ukhokhele njalo abanaki kuphela yesigodlo, kodwa futhi izakhamuzi ezweni lakubo. Eyokuqala endaweni Isigodlo ivule isikole samantombazane, izintandane nezingane ezivela emindenini ehlwempu. Abantu bomuzi ujabule ukuthenga imikhiqizo edayiswa beloshveynoy workshop, ngoba lab 'odade zahlatshwa ukunemba emsebenzini. Nelineni, umsebenzi womfekethisi igolide, usilika, lace ngezandla idume hhayi kuphela e Penza, kodwa kulo lonke elaseRussia.
Indlela uvakashele endaweni engcwele
Noma ungavakashela zezindela kwabesilisa nabesifazane, ngoba uhambo olunjalo kwakuyozuzisa kokubili ingqondo nomzimba. abahambi Okuvamile njalo ngezandla ezifudumele esigodlweni sezindela ongcwele, banikezwa indawo yokuhlala kanye nokudla artless. Esikhathini sethu, abanye zezindela Orthodox vakashela, baphile khona isikhashana, uyathandaza ukusebenza zilingana nezinhlobo izimfundamakhwela ziyaye. Ngaphambi kokuza uthole imvume kumnikazi prioress, ukuba khona interview, ukufakazela nezinhloso ezinhle futhi nezinhloso. Ngaphezu imibhalo futhi izingubo nawe kudingeka babe ukuphenduka, ukuthobeka nokulalela. Kufanele kube uze ulandele iseluleko futhi isibonelo lezindela odade ukuba nizifeze zonke oda kanye nemiyalelo. Lolu hlobo ezokuvakasha akuyona ovamile kakhulu kulezi zinsuku, kodwa uhambo ukuze zezindela ungowesifazane noma owesilisa kuyoba umfutho engcono imvuselelo futhi kusindiswe umphefumulo. Ayikho into engcono ngaphezu kokukhonza ungasuki izinkathazo lwezwe Gxila izwe elihluke, esibuswa ukholo, ithemba nothando.
Kanjani ukuba sivume icala futhi athole Esingcwele?
Umprofethi uMalaki: umlando, ngomthandazo nangokunxusa ezithakazelisayo amaqiniso
Yini edingekayo ukuze ube indela? Uba kanjani indela eRussia?
Izinhlobo ekhona imisebenzi engokomoya
UDemetrius ngoMgqibelo: ukusungulwa umlando namasiko Yonke Imiphefumulo
Ukudla kwe-alkaline: uhlu lwemikhiqizo, amamenyu, zokupheka, ukubuyekezwa
Indlela yokwenza Ifrit yinduku entendeni "Maynkraft" - ukuzingelwa rarities
Indawo yokudlela Valenok ( "Valenok") ekhelini, imenyu, ukubuyekezwa
Indlela yokudla uwoyela flaxseed: amathiphu alula
SNIP - kuyini? Isakhiwo amakhodi: uhlu kwemibhalo, izidingo eziyisisekelo
Indlela yokwenza i-bat ngaphandle kwezingodo wena
Indlela phinda isikipha: izindlela ezilula
Recipe Ajab-sandalwood ngamunye ukupheka ngokwakho!
Resort Ski Malakhovo Tula esifundeni - ezingabizi ngempelasonto iholide